तिथि मेरो पत्रु » प्रेम7सजिलो कदम
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 16 2020 |2मिनेट पढ्न
प्रेम मा खस्कँदै संसारमा सबैभन्दा जादुई भावना को एक छ. शुद्ध परम आनन्द र सन्तुष्टि भरिएको, सही व्यक्ति संग प्रेम हुनको तिमी केहि जित्न सक्छौं जस्तो लाग्छ बनाउँछ. हामी साँच्चै एक व्यक्ति प्रेम गर्दा, आनन्द र दुःख दुवै अनुभव सम्बन्ध को निष्कपटता र घनिष्ठता को वास्तविक प्रमाण छ. प्रेम जटिल छ, जबकि, हामी बताएको छ तल के प्रेम छ र प्रेम स्थायी हासिल गर्न कसरी7सजिलो कदम.
चरण #1: यो एक
तपाईंको प्राण जोडीलाई पाउन सकिन्छ प्रतीक्षा छ. अधिकांश समय, तपाईं आफ्नो अन्य आधा भेला हुँदा तपाईं तुरुन्तै थाह, आफ्नो दुई प्राण जडान र तपाईं सधैंभरि उनलाई ज्ञात छ भने तपाईं महसुस हुनेछ लागि. तपाईं पाएका छन् यस, यो सकारात्मक मा मात्र ध्यान महत्त्वपूर्ण छ. केवल पीडा नेतृत्व गर्नेछ आफ्नो साथी मा खामियहरुको लागि खोज. आफ्नो साथी को र बदलामा हरेक पक्षलाई अँगाल्न सिक्न, तपाईं अनन्त बफादारी र प्रेम प्राप्त हुनेछ.
चरण #2: आफ्नो साथी आवश्यकता रिझाउनुपर्ने
कुनै पनि सम्बन्ध यो आफ्नो आवश्यकता आफ्नो साझेदार सन्तुलित छन् महत्त्वपूर्ण छ. अधिकांश समय तपाईं नै पृष्ठ मा हुनेछ तर आफ्नो आवश्यकता विभिन्न हुँदा केही परिदृश्य र समयमा हुनेछ. आफ्नो आवश्यकता को सबै भेट गर्दै छन् यो सुनिश्चित गर्न आफ्नो साथी गरेको जूता मा आफैलाई राख्न महत्त्वपूर्ण छ.
चरण #3: आफ्नो साथी सुन्नुहोस्
तपाईं प्रेम कसैले सुनेर तिनीहरूले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न कसरी अतिरिक्त हो जो सिक्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो. यो पनि तपाईं आफ्नो साथी जडान महसुस गर्न मदत गर्नेछ, तिनीहरूले व्यक्तिगत संघर्ष मा हो जहाँ बुझ्न, आवश्यकता समयमा तिनीहरूलाई समर्थन, र मदत गर्न विभिन्न तरिका पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई मुस्कान बनाउन. मानव जगतले रूपमा, हामी निरन्तर सुन्नुभएको आफ्नो प्रेम बलियो रहिरहन महत्त्वपूर्ण छ, जो किन सिक्ने र बढ्दै छन्.
चरण #4: आफ्नो साथी मोल
साभार तिनीहरूले आफ्नो बन्धनलाई बलियो मदत गर्नेछ भन्ने सबै आफ्नो साथी बारेमा राम्रो कुरा र सकारात्मक कुराहरूको मूल्यांकन. असल ध्यान दियौं सजिलो अन्य कुराहरू जान बनाउँछ, मतभेद अलमल्याउने बेवास्ता, र आफ्नो साथी अपेक्षालाई बिताइरहेका को कार्य स्वीकार्न.
चरण #5: आफ्नो साथी संग समय खर्च
सँगै खर्च योजना बनाइरहेका दम्पतीको रूपमा बढ्न महत्वपूर्ण छ. सँगै समय बिताएर, तपाईं आफ्नो विचार साझा मिल्नेछ, भावना, र समस्या. यो साझा समय संग, आफ्नो बन्धन रोमान्टिक सम्बन्ध अलावा घनिष्ठ बनाउन झन् बलियो हुनेछ. अनन्त प्रेम गर्न प्रमुख साथीहरू धेरै राम्रो भएको छ.
चरण #6: आफ्नो साथी को लागि तरिका
तपाईं राम्रो कुरा विचार भने, आफ्नो साथी भन्नेछन्. दया एक दुर्लभ अझै प्रभावकारी रोमान्टिक विशेषता हो. यो जोखिम लिन्छ दयालु हुन, दया गाँसेर छ, जबकि कठोरताका अन्ततः एक साझेदारी मा दूर खान्छ.
चरण #7: जीवित रोमान्स राख्नुहोस्
एक रोमान्टिक यात्रा वा इशारा मात्र सिद्ध आश्चर्य छ, तर अनुभव जीवित र भावुक कुराहरू गर्न मदत. नयाँ कुरा उठाउनु सँगै प्रत्येक अन्य नयाँ र रोचक कुराहरू उजागर गर्न मदत गर्नेछ.
प्रेम मा गिरने रोमाञ्चक छ, जबकि, यो आवेग र तीव्रता सम्बन्धले रूपमा नै छैन भन्ने महसुस गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ. प्रेम साहस र काम लाग्छ, र यो प्रेम बलियो बनाउँछ भन्ने विभिन्न पक्ष संयोजन छ. तर एक पटक प्रेम भन्ने ठोस स्तर पुग्छ, यो बाक्लो र पातलो माध्यम अटल समर्थन हुन्छ, र यो साँच्चै भङ्ग कहिल्यै गर्न सक्ने एक जडान छ.